झारफूक गर्छु भन्दै ३० वर्षकी महिलाको कोठामा मध्यरातमा गएर…. – List Khabar
Home / समाचार / झारफूक गर्छु भन्दै ३० वर्षकी महिलाको कोठामा मध्यरातमा गएर….
admin October 20, 2021 समाचार Leaveacomment 74 Views
काठमाडौ । झारफुक गर्ने बहानामा महिलालाई कर णी गर्ने एक जना पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तानसेन–३, भगवती टोलमा बसेर झारफुक गर्ने तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं। १० खैरेनीका ३२ वर्षिय केदार रनपाललाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका पुरुषले सोमबार राति साढे १० बजे तानसेन बस्ने ३० वर्षकी महिलाको कोठामा गएर झा,’रफुक गर्ने बहानामा ब,’ला त्कार गरेका थिए । पक्राउ परेका पुरुषले ज,’बर्जस्ती गरेको भनी ती महिलाले छिमेकीलाई जानकारी गराएपछि छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
लगत्तै उनलाई मंगलबार बिहान २ बजेतिर पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिए । सोमबार मात्रै प्रहरीले १३ वर्षकी बालिकालाई कर णी गरेको आरोपमा तानसेन–११, का २० वर्षिय प्रेम सुनारलाई पक्राउ गरेको थियो ।
Previous यी २२ वर्षीय युवकका ३ पत्नी, पत्नीहरूसँग मिलेर चौथो पत्नी खोज्दै ! [कारण थाहाँ पाउँदा दुनियाँ हैरान]